Lanyard Isongo Factory - China Lanyard Isongo Abakhiqizi futhi abahlinzeki
Amasongo emisila yenkomo angabonakala kabanzi kuma-boutique. La masongo alungele ukukhangisa, ukukhuthaza, ukukhombisa umoya weqembu, ukusekela iqembu lezemidlalo eliyintandokazi, noma ukubonisa nje isitayela esenzelwe wena. Ngokungafani namasongo wendabuko, kunezinzuzo zentengo ephansi, isisindo esilula kanye ne-logo eyenziwe ngezifiso. Kungabekwa ngezifiso ngosizo lwezinto ezahlukahlukene, imibala, ilogo, nezinye izinsimbi. Ihlotshiswe ngebhande lokuphepha noma ukuvalwa okulungiswayo. Ukuvalwa okuguqukayo kungenza ukuthi amasongo alingane ezandleni. Amasongo e-Slap angakhiqizwa nge-neoprene noma ngento ye-lekab, inebhande lensimbi ngaphakathi kwamasongo. Usayizi wayo ojwayelekile ungama-230 * 85mm. Amasongo alukiwe enziwe ngendlela oyifisayo njengoba kungenzeka ukuthi alukiwe ngamaphethini ahlukahlukene. Usayizi wayo ojwayelekile ungama-360 * 10mm, usayizi owodwa ulingana kakhulu (ulingana nesiyingi sesihlaka sesi-6 `` ~ 8 ''). Uma ukhetha usayizi owenziwe ngokwezifiso, lokho kuyamukelwa. Okuqukethwe kwamasongo alukiwe kuyinyiloni noma i-polyester. I-logo ingaba ukuphrinta kwesilikrini, i-sublimated, iphothiwe njll. Ukwenza i-logo yakho ivelele, ukuza kithi kungukukhetha kwakho okuhle kakhulu. Njengomhlinzeki wenkonzo eyodwa, sizonikeza ngomkhiqizo ohlanganisa ukupakisha kwawo. Xhumana nathi manje, ungavumeli ithuba lishelele.
Amasongo emisila yenkomo
Lanyard Slap Namasongo